एक नायिकाको दुखद अन्त्य – सेक्स स्क्यान्डलको भित्री कथा ~ The Nepal Romania
एक नायिकाको दुखद अन्त्य – सेक्स स्क्यान्डलको भित्री कथा
1:38 PM चलचित्र समाचार No comments
मोडल तथा नायिका जेसिका खड्का (ज्योति खड्का) ले आफ्नै कोठामा झुण्डिएर आत्महत्या गरेको दुखद खबरले हामी मर्माहत भएका छौँ । हामी उनको दिवंगत आत्माको चीर शान्तिको कामना गर्दछौँ । उनी बसन्तपुरस्थित आफ्नै निवासमा पासो लगाएको अवस्थामा भेटिएकी थिइन । सुनसरीकी ज्योति खड्‍का नायिका बन्ने धुनमा तत्कालिन प्रख्यात कमेडी गाएक प्रकाश ओझाको निकट बन्न पुगेकी थिइन । सो क्रममा प्रकाशसंग भएका यौन संसर्गका दृष्य सहितका भिडियो र फोटाहरु सार्बजनिक भए पछि प्रकाश ओझालाइ कैद हुनुका साथै उनको संगीतक यात्रानै अबरुद्ध भयो । प्रकाशका प्रतिस्पर्धी शिशिर सुवेदीले सार्बजनिक गरेका भनिएका ती निजी फोटो/भिडियो काण्ड पछि ज्योतिको जीबन अतिनै कष्टकर भएको उनले बताउदै आएकी थिइन । आफ्नो अतितबाट भाग्ने प्रयास स्वरुप ज्योति खड्‍का ले ‘जंगल क्विन’मा नायिका हुदा जेनिशा खड्‍काको नयाँ नामबाट सार्बजनिक भएकी थिइन । नाम परिवर्तन गरे पनि उनको कहालीलाग्दो अतितले उनलाई नछोडेको उनको केही समय अघाडी छापिएको बयानले पनि प्रष्ट पार्छ । इटहरीको स्थानीय साङ्गीतिक समूह मदानी समूहको म पनि एक सदस्य हुँ । त्यसमा प्रकाश ओझा शिशिर सुवेदीलगायतका व्यक्तिहरु पनि थिए । गायक प्रकाश ओझाले त्यही समूहबाट शुरु गरेको साङ्गीतिक यात्राले क्रमशः विस्तारित रुप लिँदै गयो । उहाँ राष्ट्रिय स्तरको कलाकार हुनुभयो । काठमाडौंमा कान्तिपुर टेलिभिजनको प्रशारण भर्खरै शुरु भएको थियो । उक्त
टेलिभिजनबाट ओझाको नेतृत्वमा तीते करेली नामक हाँस्य कार्यक्रमको निर्माण गर्ने कुरा शुरु हुनथाल्यो । तीते करेलीको अभिनयका लागि म काठमाडौं बस्नुपर्ने भयो । गाउँठाउँका दाजुभाइ र दिदीबहिनीबीचको त्यो जमघट शुरुका दिनमा निक्कै रोमााचक भयो । तर जब दिन बित्दै गयो तब एक पुरुषले अर्कोलाई मन पराउने एउटाले अर्कोको घृणा गर्नेजस्ता कृयाकलाप बढ्न थाल्यो । त्यसै क्रममा मलाई शिशिर सुवेदीले औधी मन पराएको भन्दै बिवाह प्रस्ताव गरे । तर म त्यो प्रस्ताव स्वीकार गर्न समर्थ भइनँ । मैले हुँदैन भन्ने जवाफ दिएकै दिन शिशिरले भनेका थिए यो घमण्डको जवाफ म एक दिन दिउँला । म प्रकाश ओझाको प्रतिभा र व्यक्तित्वबाट निक्कै नै प्रभावित थिएँ । हुन पनि उहाँको प्रतिभाबाट हाम्रो इटहरी शहर निक्कै गौरवान्वित पनि थियो । त्यसैले मलाई अरुको भन्दा प्रकाश ओझाको बढी भर लाग्थ्यो । तर एक दिन मलाई प्रकाश दाइले मैले बाथरुममा नुहाउँदै गरेको नग्न तस्वीर देखाउनुभयो । होइन भनौं मैं हुँ त्यो हो भनौं त्यो फोटो खिचेको मलाई थाहै छैन । प्रकाशले त्यो फोटो खिचेपछि मलाई श्रीषा कार्की बनाउँछु भन्नेसम्मको धम्की दियो । त्यो धम्कीपछि मैले सोचें म मर्नु ठीक होइन । आफ्नी आमा पनि तीन वर्षको छँदै मरेको । कान्छी आमाले स्याहार सुसार गरेकी म मर्नुबाट मेरो परिवारमा ठूलो चोट पुग्छ । त्यसैले प्रकाश ओझाका शर्त मान्नुबाहेक मसँग कुनै बिकल्प रहेन । शब्दमा भन्नु नपर्ला प्रकाश ओझाका प्रत्येक माग मैले पूरा गरें । लोग्ने फेर्दै हिँड्ने इटहरीकी बद्नाम युवती सुदेशा सिग्देल र प्रकाश ओझाबीच सुमधुर सम्बन्ध थियो । म सुदेशालाई दिदी भन्थें । एक दिन सुदेशाले शिशिर सुवेदीको सहयोगमा प्रकाशसँग भएका चिप्सहरु बरामद गरेकी रहिछन् । त्यो चिप्समा सुदेशाकी छोरी मनिषा म र मेरी बहिनीको पनि नग्न तस्वीर थियो । तर सुदेशाले आफ्नी छोरीको दृष्य सबै नष्ट पारेकी रहिछ । उनले ओझाले चेलिबेटीमाथि दुव्र्यबहार गरेको भन्दै उसलाई छोड्न नहुने भन्दै मलाई उक्साइन् । त्यसैले मैले ओझा विरुद्ध मुद्धा दायर गर्नमा सहमति जनाएँ । मैले बुझिन कि ओझासँगको मेरा सम्पूर्ण सम्पर्कलाई सार्वजनिक गर्ने अपराधी सुदेशा हुन् भन्ने कुरा । कारणः ओझाले ती दृष्यहरु विकि्रका लागि नभएर मात्र ब्ल्याकमेलिङ्गका लागि तयार पारेका थिए । प्रकाश ओझा पक्राउ परेपछि मलाई उनकी श्रीमतीले पटक-पटक अनुनय गरिन् प्रकाशलाई माफ दिन । उनले प्रकाशसँग मलाई विवाह गर्नका लागि पनि दबाब दिइन् । तर मैले मानिनँ । उनले मलाई पढाई खर्च र चाहिएजति पैसा दिन्छु पनि भनिन् तर मेरा लागि त्यो कुरा स्वीकार्य भएन । प्रकाश ओझा जेलबाट मुक्त भएलगत्तै उसले मसँग माफ मागिसकेको छ । उसका पनि घर परिवार छन् भनेर मैले उसलाई माफ गरिसकेको छु । हुन पनि गल्ती मेरो पनि हो । प्रकाशले आफ्नो चाहना धम्कीको शैलीमा व्यक्त गर्यो त्यो उसको कुरा हो मैले प्रतिवाद गर्न सकिन र चुपचाप स्वीकरा गरें वास्तवमा त्यो मेरो गल्ती थियो । उसले मलाई बलात्कार गरेको थिएन । सुदेशाले प्रकाश पक्राउ परेलगत्तै अदालतलाई बयानमा भनेकी थिइन् प्रकाशका अश्लील दृष्यहरु मैले सेभ गरेर राखेकी छु । मैले सोधें किन दिदी भनेर । सुदेशाले भनिन् न्यायाधीशले पैसा खाएर प्रकाशको पक्षमा फैसला गरे भने काम लाग्छ नि । शिशिरले इमेलमा मेरो नाङ्गो फोटो ठाउँठाउँमा पठायो भनेर पनि मैले सुनें । सुनेपछि मैले शिशिरलाई सोधें । शिशिरले सुदेशाले हो भन्यो । सुदेशालाई सोधें उसले शिशिरले हो भनी । फोटोहरु पठाउने कर्तुत गरेपछि फेरि पनि मलाई शिशिरले भन्यो ज्योति बिगि्रएको केही पनि छैन म तिमीलाई अझै पनि स्वीकार गर्छु । मेरो यो आशक्तिलाई बुझिनौं भने म जे पनि गरिदिन्छु । उसले फोन गरेका नम्बरमा मैले कलब्याक गर्दा त्यो त पिसिओबाट गरेको रहेछ । यसबाट प्रष्ट हुन्छ विभिन्न व्यक्तिलाई इमेलमार्फत मेरो फोटो पठाउने मान्छे शिशिर हो । अनि पछिल्लो समयमा मेरो बद्नाम गर्ने उद्देश्यले सीडी बजारमा ल्याउने सुदेशा र शिशिर नै हुन् । किनभने त्यो सीडीमा सुदेशाले आफ्नी छोरीलाई जोगाएकी छन् र मलाई मात्रै प्रस्तुत गरेकी छन् । भरपर्दो आधार छ उनले अदालतमा चिप्स कपी गरेर राखेको बयान दिएकी थिएन । यसबीचमा मैले पटक पटक मर्ने प्रयास गरें । मलाई जीवन भन्दा श्रीषा कार्की बन्नु उचित पनि लाग्यो । तर मरेपछि हारिन्छ भनेर म मर्न सकिन । जित्छु एकदिन ममाथि भएको अन्याय जित्छु भनेर आजसम्म बाँचेकी छु । तर, राति राति मोबाइलमा फोन आउँछ- कति पैसा चाहिन्छ त्यसले पाउने हामीले नपाउने… तिम्रो … त कति राम्रो रैछ हेर्न मात्रै देऊ न यस्ता फोनबाट आजित भएर मैले मोबाइल बोक्न छाडें । बाँचौ आज पनि समाजले राम्रो भन्दैन मरौं हारेजस्तो हुन्छ म के गरौं दोधारमा छु । नेपाली फोरममा पोस्ट भएको यो बयानको आधिकारिकता पुस्टि गर्ने बास्तबिक सोर्स त्यहाँ नदिइएको भए पनि पत्रकार बिश्वमणि सुबेदीले पाँच बर्ष अघाडी सो बयान नयाँ पत्रिकाका लागि लिएको बताएका छन्। हिमाल खबरपत्रमा छापिएको अर्को बयानमा ज्योतिले आफुलाई प्रकाश ओझाले ब्ल्याकमेल गरेको र सो कुरा परिवारलाई नभनेकोले दुख पाएकोमा पछुतो मानेकी थिइन : २० वर्षकै उमेरमा धेरै नसोचेका कुरा भोगिसकेका कारण म भोलि यही नै हुन्छु भनेर भन्न सक्ने अवस्थामा छैन। तर एउटा पछुतो भने सधैँ रहिरहनेछ। समयमै सारा कुरा परिवारलाई भन्न सकेको भए आज म यस्तो अवस्थामा हुने थिइनँ होला। यदि मेरो जस्तो घटना अरू माथि पनि भइरहेको छ भने घरका मान्छेलाई सबै कुरा भन्न म उनीहरूलाई अनुरोध गर्दछु। मैले त यस्तो दिन भोग्नु पर्‍यो-पर्‍यो, तर अब अरू कसैले अर्की ज्योति खड्का बन्नु नपरोस्। नेपाली पत्रका अच्युत कोइरालाले लिएको एक अन्तरबार्तामा ज्योतिले भनेकी थिइन: अरुलाई भन्दा विश्वास गर्दैनन्, कतिले त प्रकाशलाई फँसाउन र चर्चामा आउन यसो गरी भनेर मेरो मुखेञ्जी नै पनि भने । तर मैले उसलाई भाइटीका लगाइदिएकी थिएँ । हामीबीच आत्मीयता थियो । उसको (प्रकाश) घरमा जान्छु भन्दा आमाले पनि रोक्नुहुन्न थियो । उसको वाइफसँग पनि मेरो राम्रो सम्बन्ध थियो । दुई छोरीहरुले पनि मलाई दिदी भन्थे । तर कहाँनेर कुरा बिगि्रयो भने उसले कतिबेला मेरो नाङ्गो फोटो खिचिसकेछ । त्यो देखाएर मलाई ब्ल्याकमेलिङ गर्यो ।
विनिता र दिक्पालविरुद्ध उजुरी नै उजुरी
अमिताभ बच्चनको निधन ??? !!!
पैसा तिरेपछि यसरी देखाईन सम्झनाले ! (भिडियो सहित)
नायिका ऋचा घिमिरेलाई पुत्र लाभ
धम्की दिने दिक्पालले माफी मागे
सुष्मालाई बिद्या बालन बन्ने रहर
चपली हाइटकी हिरोइन विनिता बराल प्रहरी अनुसन्धानको ...
एक नायिकाको दुखद अन्त्य – सेक्स स्क्यान्डलको भित्र...
किसमा नेपालीलाई कसले जित्ने ?
धुर्मुस र माग्ने बुढाको झगडाले मेरी बास्सै संकटमा
९ बजे सुमिनाले के गरिन् ?